संयुक्त बामको प्रचार अभियान सुखौरामा : संसद विकास कोषको बजेट दुरुपयोग भएकोमा आक्रोस ! – ebaglung.com
२०७४ कार्तिक १२, आईतवार १८:५०	Home Slider, Top News, प्रमुख समाचार
विजय राना बागलुङ २०७४ कात्तिक १२ । संयुक्त बाम गठबन्धनले आईतवार बागलुङको बरेङ गाउँ पालिका सुखौरामा चुनाव प्रचार प्रसार कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ ।
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै संयुक्त बाम गठबन्धन बागलुङ क्षेत्र न. १ प्रतिनिधी सभा सदस्यका उमेदवार सूर्य पाठकले जिल्लाको विकास गर्ने खाका आफुहरु संग रहेको बताउँदै बाम गठबन्धनका उमेदवारलाई मतदान गरि विजयी गराउन आग्रह गरे ।
जिल्लामा प्रशस्त मात्रामा पर्यटन, कृषि, उद्योग, जडिबुटि, विद्युतको सम्भावना रहेकाले आफुहरुले जिते मात्रै ति सबै विकासका ढोकाहरु खोलिने उनको भनाई थियो ।
पाठकले अघिल्लो पटक जिल्लाका तिन वटै क्षेत्र नेपाली कांग्रेसले जित्दा विकास गर्नुको साटो झनै अपारदर्शी कार्य भएको, विकासका नाममा आएका बजेटमा अनियमितता भएको, संसद विकास कोषको बजेट समेत सही सदुपयोग नभएकोमा आक्रोस व्यक्त गरे ।
पारदर्शीता, विधिको शासन, मानव अधिकार तथा सम्मान आफुहरुको मुख्य एजेण्डा भएको पाठकको भनाई थियो ।
निर्वाचन क्षेत्र न. १ (ख) प्रदेश सभाका उमेदवार कृष्ण थापाले हरेक कठिन परिस्थितिमा बामपन्थिहरु नै जनताको माझमा रहेकाले जनताले पूर्ण विश्वासका साथ बामपन्थी उमेदवारलाई विजयी गराउने विश्वास व्यक्त गरेका थिए ।
नेपालको इतिहासमा सबै भन्दै धेरै पटक शासनसत्तामा रहेर कांग्रेसले देशलाई खोक्रो बनाएको आरोप लगाउँदै थापाले त्यस्ता संगठनका उमेदवारले पुनःजनता सामु जाने र मत माग्ने नैतिकता नभएको समेत उनको भनाई थियोे ।
कार्यक्रममा पुर्व सांसद तथा अखिल नेपाल महिला संघका अध्यक्ष मिना पुन, नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रिय सदस्य चिनिमाया काला, पदिप थापा मगर, नेकपा एमाले प्रदेश न. ४का सदस्य श्रीप्रसाद शर्माले पनि बोलेका थिए ।
कार्यक्रममा २१ सदस्यीय चुनाव प्रचार प्रसार समिति गठन गरिएको छ । समितिको संयोजकमा टिकाराम शर्मा, र सह–संयोजकमा इन्द्रबहादुर खत्री रहनु भएको छ । साथै अखिल नेपाल महिला संघ क्रान्तिकारीले पनि १७ सदस्यीय चुनाव प्रचार प्रसार समिति गठन गरेको छ ।
समितिको संयोजकमा मिना खत्री र उप–संयोजकमा मैना थापा रहेका छन् ।
राष्ट्रिय जनमोर्चा बागलुङका सल्लाहकार टिकाराम शर्माको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा स्वागत मंतव्य लालबहादुर पुन र सञ्चालन कृष्णप्रसाद शर्माले गरेका थिए ।
समग्र बागलुङको विकास र समृद्धिलाई अगाडि बढाउन सधै लागी पर्ने पौडेलको प्रतिबद्धता